I-LG Q8, iselfowuni entsha enekhamera ephindwe kabini, isikrini esiphindwe kabini kunye nokungangeni manzi | Iindaba zeGajethi
I-LG Q8, iselfowuni entsha enekhamera ephindwe kabini, isikrini esiphindwe kabini kunye nokungangeni manzi
I-LG yaseMzantsi Korea yandisa usapho lwe-Q lwezixhobo zayo ezihambayo. kwaye iyenza njalo ngemodeli ye-LG Q8, a efowuni Oko kuyikhumbuza kakhulu i-LG V20, kodwa oko kongeza ezinye izinto njengokukwazi ukuntywila phantsi kwamanzi. I-LG Q8 ithiwe thaca e-Itali, nangona kulindeleke ukuba ifikelele kwamanye amazwe kwiiveki ezimbalwa.
I-LG Q6 ibisandula ukwenziwa ekuhlaleni. Iselfowuni ekumgangatho ophakathi ifuna ukukrwela isabelo sentengiso, kuba umenzi wayelilibele olu luhlu lweetheminali. Nangona kunjalo, wayefuna ukufaka into ready kwaye ukubheja kwisiphelo esitsala amehlo esinokulwa neendawo eziphakamileyo.
1 LG Q8, nayo yonke into ephindwe kabini
2 Amandla aqinisekisiweyo kunye nokubanakho ukuntywila emanzini
3 Ibhetri yokutshatisa kunye ne-Android 7.0 Nougat
LG Q8, nayo yonke into ephindwe kabini
Into yokuqala etsala umdla wale mobile intsha kukuba inescreen esiphindwe kabini ngaphambili. Njengoko sele sithethile, eli nqaku aliyonto intsha; i LG V20 Sele ndibonisile. Ke ngoko, njengepaneli ephambili siya kuba ne-diagonal ye 5,2 intshi ngesisombululo 1.440 x 2.560 pixels. Ngokubhekisele kwiscreen sesibini-sibekwe phezulu-siyakusebenza njengepaneli yesaziso, kunye nenkxaso yokulawula ezinye iimenyu zeefowuni okanye usetyenziso. Isisombululo sayo ziipikseli eziyi-160 x 1.040.
Okwangoku, enye into ephindiweyo esele iba semgangathweni yikhamera yangemva kabini. Iqukethe inzwa ephindwe kabini: enye ye-13 MPx kunye nenye ye-8 MPx; ngokudibeneyo siya kuba nakho ukudlala ngobunzulu bokubamba, kunye nokongeza ezinye iziphumo. Kwaye ividiyo? Yitsho kakuhle loo nto i-LG Q8 iyakwazi ukurekhoda iiklip kumgangatho we-4K kunye nokuthimba ukwenza ngokucotha kwii-120 fps. Ngokubhekiselele kwikhamera yayo yangaphambili siya kufumana i-5 megapixel sensor. Oku kuya kugcinelwa abantu abadumileyo uqobo okanye kwiminxeba yevidiyo.
Amandla aqinisekisiweyo kunye nokubanakho ukuntywila emanzini
I-LG Q8 entsha ifuna ukukhuphisana nale ingasentla. Ke umenzi akakwazanga kubuya umva kwaye kufuneka abheje ngokongeza iprosesa ephezulu evela kwiQualcomm. Kwaye kuye kwanjalo: ukhetho yiSpapdragon 820. Le chip iyonwabele Inkqubo ye-4 cores kwaye isebenza kwi-2,15 GHz frequency frequency. Kodwa ukuze awuwedwa, imemori ye-RAM iye yongezwa ukuhambelana: 4 GB eya kuqinisekisa ukusebenza kakuhle kuhlaziyo lwexesha elizayo.
Eminye, ikuxelele ukuba inendawo yokugcina engama-32 GB yangaphakathi kwaye unganyusa ngokusetyenziswa kweememori khadi kwifomathi ye-MicroSD. Indawo iyonke esinokuyifumana? Ngokwenkampani, uya kuba nayo yonke i-hard drive ephathekayo epokothweni yakho. Kwaye kunjalo i-LG Q8 iyakwazi ukubamba ukuya kwi-2 TB ngaphakathi.
Ngoku, ukuba kukho into ethi LG yazi ukuba idlala kakuhle ngayo, kube kunokwenzeka ukuyisa emanzini. I-LG Q8 ine-IP68 yesiqinisekiso. Oku kuthetha ukuba ungangena emanzini. Ngoku, imizuzu engama-30 kunye nobunzulu beemitha eziyi-1,5 ubunzulu.
Ibhetri yokutshatisa kunye ne-Android 7.0 Nougat
Ibhetri yefowuni ephathwayo ikwayinto ekubhekiswa kuyo ngabasebenzisi. I-LG Q8 ineyunithi ye- Umthamo weemitha ezingama-3.000. Oku kuthetha ukuba kwityala elinye kuya kufuneka ubenakho ukonwabela amandla aneleyo okuphatha usuku olupheleleyo. Ngoku, njengoko usazi kakuhle, amanani ahlala exhomekeke ekusetyenzisweni komsebenzisi ngamnye.
Ewe Inguqulelo yenkqubo yokusebenza ebandakanywayo yi-Android 7.0 Nougat. Ke ngoko, phakathi kwebhetri enkulu yamandla kunye nokuphuculwa kongezwe kwiqonga le-android eliluhlaza, ukusebenza kulindeleke ukuba kufikelele kwinqanaba.
Okokugqibela, i-LG Q8 ithiwe thaca ngokusemthethweni e-Itali apho Ingathengwa ukusuka kule nyanga kaJulayi ngexabiso lama-euro angama-599,90. Kwaye kulindeleke ukuba ifikelele kwiimarike ezahlukeneyo kwezi veki zimbalwa zizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-LG Q8, iselfowuni entsha enekhamera ephindwe kabini, isikrini esiphindwe kabini kunye nokungangeni manzi
"Despacito", nguLuis Fonsi kunye noDaddy Yankee, sele ingoma edlalwa kakhulu kwimbali